July Dream: Sleeping with bra
Posted by JulyDream at 10:42 AM
အမျိုးသားများ UW နဲ့အိပ်သင့် မသင့်
မမတွေ့ဖူးတဲ့ အာဖရိက က အပျိုပေါက်တွေ ဘယ်သူမှ ဘရာ မ၀တ်ကြဘူး
အဲဒီမြီးကောင်ပေါက်တွေ ကျောင်းလာတတ်တဲ့ ပုံစံမြင်ရတာ ကိုယ်တောင် အူတွေယားတယ်
နေ့တောင် မ၀တ်ကြတော့ ည ဆို ..
ဘရာ ကိုအလေးအနက်ထားဝတ်တာ အရှေ့တိုင်းက ပိုများမယ်လို့ ထင်ပါတယ်
ဘယ်လိုစိတ်ကူး ရလို့ များ ဒီအကြောင်းရေးရလဲ မောင်လေးရယ်....း)...
ကိုဂျူလိုင် ရေးထားတာ ဘရာကို ဘာကြောင့်ဝတ်ရတယ် ဆိုတာ ရေးထားတဲ့ အချက်အလက်တွေက ဟုတ်မယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကင်ဆာဖြစ်တာ မဖြစ်တာကတော့ WHO တွေ နိုင်ငံတကာ ဆေးကောင်စီတွေက အတည်ပြုထားတာ မတွေ့သေးပါဘူး။ Research အသေးလေးတွေက ထွက်လာတဲ့ အချက်အလက်တွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အားထားနိုင်လောက်တဲ့ Experiment Design နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ Research မဟုတ်ပဲနဲ့တော့ ဒါကို အတည်ပြုလို့ မရနိုင်ပါဘူး။
အခုပို့စ်ကို မရေးခင်မှာ BRCA အကြောင်း ကျွန်တော် သွားဖတ်သေးတယ်။ CA ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်း Risk factor ထဲမှာ ဘရာ ဝတ်ပြီး အိပ်လို့ CA ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း လုံးဝ မပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဘရာဝတ်အိပ်ရင် CA ဖြစ်တယ် ဆိုတာ သက်သေပြစရာ မရှိဘူးလို့ပဲ ရေးလိုက်တာပါ။
ဘရာဝတ်အိပ်ရင် ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများတယ်ဆိုတဲ့ အမေရိကားက တွေ့ရှိချက် ဆိုတာကိုလည်း WHO က လေ့လာဆန်းစစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ တကယ်သာ မှန်ရင်တော့ WHO က အတည်ပြု ကြေညာမှာပါ။
အခုလို အကြံပြု ထောက်ပြတဲ့ ဆွေးနွေးချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ဒီကိစ်ကို သိချင်နေတာကြာပြီ..ကိုယ်က ၂၄ နာရီ ၀တ်တတ်တဲ့သူဆိုတော့ အဲ့လို တွေကြားပြီး ဟုတ်နိုင်သလားဆိုပြီး ကြောက်လာလို့။ ခုတော့ ကျေးဇူး ကိုဂျူလိုင်။
ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေတာတွေ သိရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ..
လူဆိုးကြီး အလီဘိုင်ကျောက် ကလာပြီးကလေးအတွက်လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ ပြောသွားသေးတယ်...
ကိုယ့် ဘာသာကိုယ်ပဲတစ်စစီကျိူးပဲ့ နေ အဲလေ...
တွဲရေးခွဲရေးတွေ ကိစ္စက လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ရှိတဲ့ 
အလီဘိုင်ကျောက်ကို ကျွန်တော် ဘာမှ မပြောပါဘူးခင်ဗျာ။ ပြောနေတာက ကိုပီတာပါ။ သားလေးအတွက်ဆိုတော့ စဉ်းစားစရာပဲ။ အင်း... ကြည့်ရတာ ကိုပီတာမှာ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ရှိပုံပဲ။ ဒိုင်ပွဲရပ်နဲ့ ရှုံးလို့ လူဆိုးကြီးကျောက် တောက်ခေါက်နေပြီ ထင်တယ်။ =)
ညအိပ်ချိန်မှာ သက်တောင့်သက်သာရှိဖို့ တော့ လိုတာပေါ့.. နေ့ ခင်းလည်း ဘရာစီယာ အကြပ်တွေ မဖြစ်မနေ ဝတ်ရရင်တောင် ဂရုတစိုက် သတိထားသင့်တယ်..
”မိန်းခလေးတွေ ဘရာဝတ်ချင်တဲ့ အကြောင်းပြချက်က နှစ်မျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ ကလေးဘဝကနေ အပျိုဘဝကို ရောက်လာတဲ့ ရင်ဖိုမှုနဲ့အတူ ဘရာကို စ ဝတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘရာကို စ ဝတ်နိုင်ပြီဆိုတာက လူကြီးဖြစ်ပြီ အရွယ်ရောက်ပြီပေါ့။ အဲဒီရင့်ကျက်မှုအတွက် စိတ်ထဲမှာ မသိမသာလေး လက်မထောင် ဂုဏ်ယူကြပါတယ်။ အဲဒီ ဂုဏ်ယူမှုကို မရပ်လိုက်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေနဲ့အတူ ဘရာကို အမြဲတမ်း ဝတ်ချင်နေတတ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က မြီးကောင်ပေါက်စ အပျိုဖြန်းလေးတွေဟာ ရှက်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဖွဲ့စည်းပုံ ပြောင်းလဲလာတဲ့ အပေါ်မှာလည်း ရှက်သွေးဖြာကြပြန်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တချို့သောအပိုင်းတွေမှာ ပြောင်းလဲလာတဲ့ အရွယ်အစားတွေ ပုံစံတွေကို တခြားလူတွေ သတိထား မြင်သွားမှာကို စိုးထိတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ ဘရာကို တစ်နေ့မှာ ၂၄ နာရီပတ်လုံး တစ်ပတ်မှာ ခုနစ်ရက်လုံး ဝတ်ဆင်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ မီးပဲလောင်နေ လောင်နေ၊ မုန်တိုင်းပဲ ဝင်နေဝင်နေ... ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးကို ကြုံတွေ့နေပါစေ။ အဲဒီလို ဘရာ ဝတ်ထားရရင် သူတို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အရှက်တရားအတွက် လုံခြုံမှု ရှိနေပါတယ်။”
အိမ်ကလူကြီးတွေက၀တ်ခိုင်းလို့ ၀တ်တာ.. ၀တ်တဲ့အချိန်က ဘရာမဟုတ်..။ ၀တ်လဲမ၀တ်တတ်။
ကျောင်းပီးဘွဲ့ရတော့ အလုပ်ထဲဝင်တော့ သူငယ်ချင်းတချို့က ဘရာဝတ်နည်းသင်ပေးမှ ဘော်လီထက် လွပ်လပ်လို့ ၀တ်တာ.. ဒါပေမဲ့ ဘော်လီကိုပဲ ကြိုက်တယ်။ ဘရာဝတ်ရင် အိမ်ကလဲဆူတယ်။ ဘာလို့မှန်းမသိဘူး။ ကိုယ်တိုင်လဲ သိပ်မကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းကျတော့ တခါတလေ၀တ်တတ်လာတယ်။ အိမ်မှာနေရင်တော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘာမှမ၀တ်ဘူး။ လွပ်လပ်တာကိုကြိုက်လို့ပဲ။ ထမိန်ဆိုဘယ်တော့မှတင်းနေအောင်မ၀တ်လို့ အမြဲကျွတ်လို့ ထမိန်လဲမ၀တ်ဘူး။
7 Mar 10, 12:24
ုkom: ချောင်ချိတာလေးတွေ ဝယ်သွားပေးပါလို့...... အင်.. အတိုင်းဘယ်လိုတိုင်းမလဲ။
7 Mar 10, 12:21
ုkom: hernia ရမှာ စိုးလို့ကြပ်ကြပ်ကလေးဝတ်သင့်တဲ့အကြောင်း စိတ်ပူမိသူတစ်ဦးအနေ နဲ့ရေးဦးမှ ဘဲ။
7 Mar 10, 12:20
ုkom: အိမထောင်ဦး# အ်ိမ်ထောင်ဦး...
7 Mar 10, 12:19
ုkom: အိမထောင်ဦးအတွေ့အကြုံကလေးတွေ ကို စောင့်မျော်နေပါတယ်လို့.. လို့...
သြော်... စူး ရေးမှပဲ ဘရာနဲ့ ဘော်လီ မတူကြောင်းကို ဆက်လက် လေ့လာရမယ် ထင်တယ်။ ဒါနဲ့ စူးက ထမိန်မဝတ်ပဲ နေတာပေါ့နော်။ ဒီအတိုင်းကြီးတော့ မနေပါနဲ့ဟာ။ အင်း... သစ်ရွက်လေးတွေများ ပတ်ထားရမလားပဲနော်။ အဟား...
မခင်မင်းဇော်က ဘယ်ဟာကို မှန်ကန်ကြောင်း ထပ်ဆင့် ထောက်ခံသွားတာလဲ ခင်ဗျ။ စူး... ဆိုတဲ တစ်ယောက် ထမိန် မဝတ်တာ မှန်တဲ့အကြောင်းလား။ သို့လော သို့လော ဖြစ်သွားလို့ ပြန်မေးကြည့်တာပါ။
တိုင်းတာတဲ့ နည်းကို ဆက်လက် လေ့လာထားပါတယ်။ ခွက်တွေအကြောင်းလည်း ဖတ်နေပါတယ်။ လက်တွေ့ တိုင်းဖို့ပဲ လိုပါတော့တယ်။ အဟက်...
အရာရာ မင်းပါမေ လို့ပဲ... သိရအောင် ဝေမျှတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ တဆင့်ခံ ဖောက်သည်ချလိုက်ပါအုံးမယ်။
သေလိုက် ..ချီးထုတ် နှာဗူး ဂွစာဂျူလိုင် နှာတွေးပဲတွေး..
ငါကျန်ခဲ့တာကို လဒကောင်.. စိတ်ပုပ်စိတ်ယုတ် အယုတ်တမာ ဂွစာ
ဒီပို့စ်ကိုပဲ ရည်ရွယ်ထောက်ခံသွားတာပါ မောင်လေး ဂျူလိုင်.. နောက်ထပ် ဆက်လက်လေ့လာမယ့် ဘော်လီနဲ့ ဘရာ ကွာခြားချက်၊ အကျိုးကျေးဇူး ကွာခြားချက်များကိုလဲ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပါဦးမည်။
7 Mar 10, 14:01
ုkom: အခုထက်ထိ............... ( ခေါင်းကုတ်သွားသည်)
7 Mar 10, 14:00
ုkom: 22a ပါ. ဗေဒင်မမေးနဲ့ ဆန်ကုန်တယ်။
ယောက်ျားလေးများ ဘရာစီယာ ဝတ်ပြီး မအိပ်သင့်ပါ။ ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ :D
ကို ဇက်တီပြော တာအမှန်ဆုံးပါ ။
ရှင်းရှင်းနဲ့ ဘွင်းဘွင်းကြီးတွေပဲပါလား ဟရို့.....
COMMENT တွေက လည်း ရယ်ရတယ်... စာ ကလည်း ဗဟုသုတရတယ်..